Daawooyinka Si Loogu Fiirsado Inta Wax Lagu Baranayo • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka Daroogooyinka inay xoogsaaraan inta ay wax baranayaan
Daroogooyinka inay xoogsaaraan inta ay wax baranayaan
albaabka Ties Inc. 22 Oktoobar 2019
maqaal by Ties Inc. 22 Oktoobar 2019
Miyaad ka heshaa qayb yar oo ka mid ah rugta 'ritalin', xirmooyin kiniini ah oo wax lagu barto ama maandooriyeyaal yar ama dawo kale oo yar oo qolka wiilkaaga ama gabadhaada ah? Taasi maahan wax la yaab leh. Waxaa jirta fursad wanaagsan oo ay u isticmaali doonaan agabyadan si ay sifiican xoogga u saaraan inta ay wax baranayaan. Hype oo ah mid ay aad u jecel yihiin ardayda.
1 Ritalin iyo Kiniiniga barashada
2 Caqli ama hadal xumo
Diirad saarida inta aad wax baranaysid had iyo goor ma fududaan. Qalabka loo yaqaan 'console game' waa mid la yaab leh, waxaad dooneysaa inaad daawato taxanahaaga Neflix, waxay qabanayaan shaqooyin aan caadi aheyn deriskaaga ama saaxiibkaa ayaa ku sii dheereysanaya. Dhiirrigelinta maalinlaha ah ayaa kordhay oo keliya, taas oo micnaheedu yahay in dad badan oo dhalinyaro ah ay u adeegsanayaan qaabkii ay wax isugu ururin lahaayeen Laakiin waa maxay saamaynta kheyraadkan oo ay shaqeeyaan?
Ritalin iyo Kiniiniga barashada
Daawada Ritalin, oo ay si weyn u isticmaalaan dadka qaba ADHD, ayaa ardayda u yaqaanaan hab lagu hagaajiyo waxqabadka waxbarashada. Sikastaba, dawadu waxay leedahay waxyeelo badan oo taban. Gaar ahaan dadka adeegsada iyagoon walwal ka qabin ADHD. Welwel, hurdo la’aan, dawakh, wareer iyo xitaa niyad jab ayaa dhici kara. Uma muuqato mid togan, laakiin wali arday badan ayaa ku dhaaranaya inay diiradda saaraan shaqadooda waxbarasho dhawr saacadood. Isla sidaas oo kale ayaa loo adeegsadaa kiniiniga daraasadda iyo kiniiniyada kale ee laga heli karo suuqa. Kiniiniga daraasadda wuxuu taageerayaa u fiirsashada iyo xusuusta.
Caqli ama hadal xumo
Si kastaba ha ahaatee, Xarunta Nafaqada iyo khubarada kale waxay ka digayaan waxyeelada xun waxayna ku andacoodaan inay tahay 'gariir'. Inta badan waa kheyraad qaali ah oo lacag fiican sameeya, ayay ka digayaan. Kiniinnada daraasadda waxay inta badan ku jiraan kafeyn badan iyo walxo kale kuwaas oo hagaajin lahaa feejignaanta iyo heerka tamarta. Walxaha ku jira kaniiniyadan waxaa inta badan loo dalacsiiyo inay ka wanaagsan yihiin Ritalin iyo cabitaannada tamarta. Marka loo eego Xarunta Nafaqada, qaadashada kaniiniga noocaan ah waa macno darro. "Caffeine waxay kaa dhigaysaa in yar oo feejigan, laakiin taasi waa waxa koob kafeega ku jira. Walxaha kale si fudud looma caddayn inay wax saamayn ah ku yeelanayaan xooggaaga ama xooggaaga. Xaqiiqdu waxay tahay in dhalinyaro badani ay ku dhaartaan kiniinka Daraasadda, qaadashada Ritalin ama microdosing - qaadashada qiyaaso aad u hooseeya oo cilmi-nafsiga ama daroogooyinka kale si ay diiradda u saaraan iyo heerarka sare.
1 faallo 0 FacebookTwitterPinterestEmail
CBDA iyo CBD: Maxay yihiin kala duwanaanshaha?
Seedo wuxuu ku dhawaaqay Snoop Dogg inuu noqdo Danjire Brand
oybek May 21, 2021 - 15:54
Cilmi baaris ayaa daaha ka qaaday suurtagalnimada xeryahooda cannabis…
CBD miyay saameyn togan ku leedahay...
CBD ma kaa dhigi kartaa inaad hoos u dhigto…